In aan Trump luggooyo waxaa iga dalbaday Kaaliyeyaashiisa - Jigjiga Online
HomeWararka CaalamkaIn aan Trump luggooyo waxaa iga dalbaday Kaaliyeyaashiisa
In aan Trump luggooyo waxaa iga dalbaday Kaaliyeyaashiisa
Nikki Haley, oo ahayd safiirkii hore ee Mareykanka u qaabilsanaa Qaramada Midoobey ayaa sheegtay in laba qof oo kaaliyayaal sare ka ah Aqalka Cad ay ka dalbadeen in ay luggooyso Madaxweyne Donald Trump.
Sida lagu qoray buug cusub, Ms Haley waxay sheegtay in madixii hore ee shaqaalaha ee Aqalka Cad, John Kelly iyo Xoghayihii hore ee Arrimaha Dibadda, Rex Tillerson, in ay u sheegeen in ay diido qaar ka mid ah dalabyadii Trump.
Sida la soo xigtay, waxay u sheegeen in “ay isku deyayaan in dalka ay badbadiyaan”.
Ma jirin wax war ah oo Mr Tillerson uu ka soo saaray arrintan. Laakiin Mr Kelly wuxuu sheegay in uu doonayay in si buuxda loo wargeliyo madaxweynaha.
“Haddii ‘diidmo’ iyo ‘hakin’ ay ula jeedo in hannaanka shaqaalaha la saxo… si loo xaqiijiyo [Mr Trump] in uu og yahay xumaanta iyo samaanta ka dhalata ka fakaridda go’aannada sharciga ah, si uu u gaaro go’aan la isla ogyahay, haddaba dembiila ayaan ahay”, Mr Kelly ayaa sidaas u sheegay warbaahinta CBS ee Mareykanka.
Trump wuxuu bartiisa Twitter-ka ku qoray in uu ansax ka dhigay buugga, isagoo yiri “nasiib wacan Nikki!”
Maxay ku qortay buugga?
Nikki Haley waxay tiri, Mr Kelly iyo Mr Tillerson “waxay ii sheegeen in aysan ahayn dad liita, balse ay isku deyayaan in dalka ay badbaadiyaan”.
“Waxay ahayd go’aankooda ee ma ahayn mid ka yimid madaxweynaha, ee ah in aan nahay kuwa ka shaqeynaya danaha ugu wanaagsan ee Mareykanka, ayey yiraahdeen,” sida ay ku qortay buugeeda ay u bixisay ‘Xushmad oo dhan’, kaas oo markii hore lagu daabacay wargeyska Washington Post, waxaana la iibin doonaa beri oo talaado ah.
Sida ay sheegtay, Mr Tillerson, wuxuu ku yiri, dad baa dhiman doona haddii madaxweynaha aan la xakameyn.
Nikki Haley, oo 47 sano jir ah, waxay sheegtay in ay diiday dalabkaas kaga yimid madixii shaqaalaha ee Aqalka Cad iyo xoghayihii hore ee arrimaha dibadda. Waxaan ku yiri: Waa “halis” iyo “gardaro”.
“Halkii ay aniga iiga sheegi lahaayeen middaa, waxaa habooneyd in madaxweynaha ay u sheegaan. Ma ahan in ay i weydiistaan in aan qeyb ka noqdo qorshayaashooda janjeeray,” ayey u sheegtay CBS.
“Waxay kufiicnayd – soco oo u sheeg madaxweynaha waxa aad diidan tahay ama is casil haddii aadan jeclayn waxa uu sameynayo. Laakiin in la wiiqo ama la luggooyo madaxweyne… waa arrin aad halis u ah oo ka soo horjeedda dastuurka, waxayna lid ku tahay waxa ay dadka Mareykanka doonayaan. Waxay ahayd xadgudub.”
Safiirkii hore ee Mareykanka u fadhiday Qaramada Midoobey waxay tilmaamtay in ay madaxweynaha ku diiday sida uu u maareeyay arrintii madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin xilligii shirkii Helsinki ee 2017-kii.
Waxay sidoo kale qortay, in hadalladii madaxweynaha ee xilligii weerarkii Caddankii isla weynaa uu qaaday ee dhimashada badan sababay ee Charlottesville ee 2017-kii, ee ahaa in dad wanaagsan “ay labada dhinacba ka mid yihiin” ay ahayeen “kuwo niyad jab ah oo halis ah”.
Dibadbax rogaal celis ahaa ayaa sababay dhimashadii Heather Heyer.
Waxay sidoo kale Ms Haley sheegtay in ay tageertay dhowr xeer oo madaxweynaha uu la yimid kuwaas oo masuuliyiintii kale ay diideen – waxaa ka mid aha in Mareykanka uu ka baxo heshiiskii Nukliyeerka ee Iran iyo ka bixidda heshiiska Isbedelka Cimillada ee Paris lagu saxiixay.
Wareysiga ay siisay CBS waxay sidoo kale ku cambaareysay Dimuquraadiga doonaya in xilka laga qaado madaxweyne Trump. Xil ka qaadistaa waxay “la mid tahay xukun dil oo ka dhan ah madaxda bulshada”, ayey tiri.
Galleyda Kenya oo laga helay “Sun halis ah” Iyo Halista Ay Ku Jiraan Soomaalida Beerataa
Fursaddii Dahabiga Ahayd Ayaad Lumiseen Sidii SDP